Tag: tolo-kevitra momba ny sanda | Martech Zone
Iray amin'ireo ady mitolona atrehako amin'ny orinasa ny tsy mieritreritra ny zavatra ataon'izy ireo ary manomboka mieritreritra ny antony ampiasain'ny olona ny vokatra na serivisiny. Omeko ohatra haingana ianao… isan'andro isan'andro, ho hitanao aho mirakitra sy manova podcast, manoratra kaody fampidirana, mampihatra vahaolana avy amin'ny antoko fahatelo ary mampiofana ny mpanjifako. Bla, bla, bla… tsy izany no antony aneken'ny olona ny serivisiko. Azon'izy ireo atao ny mahazo ny iray amin'ireo serivisy ireo ao amin'ny Fiverr a
Marketing Buzzwords avy amin'ny Mashable
Ireo olona ao Mashable dia nanambatra an'ity sary ity nandritra ny 30 andro tamin'ny Marketing Buzzwords. Amin'ny maha bandy tsy zaka miteny marketing ahy dia tiako foana rehefa mijery tsara ny marketing BS isika. Hamarin-tena aho, na izany aza, ary hiaiky fa heveriko fa feno an'io sary io fotsiny. Ny teny toa ny varotra mailaka, infographic ary gamification dia tsy buzzwords momba ny marketing, fa teny tena ilain'ny mpivarotra rehetra izany. Ary ny lehibe indrindra amiko
Na inona na inona vidiny dia ny mpanjifa hatrany no mamaritra ny sandany. Ary matetika, io sanda io dia hiankina amin'ny fampiasan'ny mpanjifa ny vokatrao sy serivisinao. Mpivarotra rindrambaiko na serivisy (SaaS) maro no mampiasa fivarotana miorina amin'ny sandany hamaritana ny vidiny. Izany hoe, raha tokony handoa ny tahan'ny isam-bolana fisaka na ny tahan'ny mifototra amin'ny fampiasana dia miasa miaraka amin'ny mpanjifa izy ireo mba hamaritana ny sanda azon'ny sehatra omena ary avy eo miasa izay miverina any